Taalibaan oo weerartay safaarada Jarmalka ee Afkaanistaan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldTaalibaan oo weerartay safaarada Jarmalka ee Afkaanistaan
November 11, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Taalibaan oo weerartay safaarada Jarmalka ee Afkaanistaan. [Sawirka: Reuters]
Kabul-(Puntland Mirror) Gaari uu watay qof isa-soo-biimeeyay ayaa lagu dhuftay safaarada Jarmalka ee ku taala magaalada Mazar-i-Sharif, dalka Afkaanistaan, ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay 120 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen ilo-wareedyo booliska ah.
Weerarka maanta oo Jimce ah ayaa waxaa sheegatay masuuliyadiisa kooxda Taalibaan, taasoo ku sheegtay in uu ahaa “weerar aargudasho” ee duqayn diyaaradaha Mareykanka ay la beegsadeen gobolka Kunduz bilowgii bishaan kaasoo ay ku dhinteen 32 qof oo shacab ahaa.
Sida ay sheegeen booliiska magaalada Mazar-i-Sharif, qofka weerarka soo qaaday ayaa waxyaabaha qarxa ee gaariga u saarnaa waxaa uu la beegsaday derbiga safaarada Jarmalka ee kutaala magaalada.
“Weerarka waxa uu ahaa mid aad u weyn, kaasoo burburiyay daaqado, iyadoo dad badan oo shacab ah ay ku dhaawacmeen gudaha guryahooda,” Abdul Raziq Qaderi oo ah madaxa ammaanka gobolka Balkh halkaas oo ay kutaalo magaalada Mazar-i-Sharif ayaa sidaa yiri.
January 16, 2017 Ugu yaraan 32 qof oo ku dhintay diyaarad xamuul oo Turkigu lahaa oo ku burburtay gudaha dalka Kyrgyzstan